Daawo ama Dhgeyso rugta Xumaanta duulaanka is maamulka Canfarta. – Xeernews24
Daawo ama Dhgeyso rugta Xumaanta duulaanka is maamulka Canfarta.
7. Juni 2019 /in VIDEO/AUDIO /von admin
Daawo ama dhegeyso qaabka is maamulka Canfarta usoo abaabulo dagaalka ka socda gobolka Sitti ,sidda aad ka maqlaysaan geerarkan wuxuu ku baaqayaa in magaalooyinka Soomaaliyeed sidda Jigjigga iyo Hargeysa ay dagaal Soomaalida ku gali doonaan.
Wuxuu hanjaad u dirayaa siyaasin iyo odey dhaqmeed Soomaaliyeed oo qaarkood dhinteen Sidda Siyaad Barre iyo ugaas Hassan Hersi.
Sidoo kale wuxuu ku baaqayaa in u dagaal la gali doono madaxweynaha Soomaali-State mudane Mustafe Cagjar ,iyo ku xigeenkiisa Aadan Faarax, waliba madaxweynaha Jabuuti, Mahamuud Diri,Rayaale Xaamud qof ay ugu neceb yihiin waa siyaasi odey Buux Xussein (Ina lax dil)
Hurinta iyo abaalbul dagaal sokeeye canfar khasaare iyo burbur mooye waxba uga soo hoyan maayaan wayna ogtahay.
Docda kale ragga oloolahaan ka dambeeya waxay joogaan oo ay ku nolyihiin wada madaan reer galbeed oo sharciyaan ay mabnuuc tahay in dagaal laga dhex abaabulo ragga laf dhabarta u ah abaabulka dagaal waxaa ka mid ah ninka la yidhaahdo. Ali Wadad
oo sheegta in u yahay siyaasi mucaarad reer Jabuuti ah hadana waxaan oo colaad iyo dagaal ah faraha kula jira.sidda aan maqalay Ali wadad wuxuu degan yahay dalka Suisse.
Carukaay garani wagiisa qadaray ni baaxo beedah cabe wayanu beedi nek yaabbay
Slået op af Qafař Sidiicamoh Xongolò i Onsdag den 5. juni 2019
Ani hay ani hay qasabadih gadil✊❤️ duko cina.ani hay birta le hayla .qasbad fidah titkiye giclo .horak horal raquwa migaqa ,rabetem fida waydalal sumaq le ?✊
Slået op af Qanbisto Baxa i Lørdag den 2. februar 2019
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/06/canfar-jabha.jpg 600 480 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-06-07 10:32:182019-06-07 12:08:21Daawo ama Dhgeyso rugta Xumaanta duulaanka is maamulka Canfarta.
Go,aan Taariikhi Ah iyo Golaha Fulinta ee DDS. Siyaasi Dahir oo si qota dheer uga hadlay dagaalka ka socdda Sitti